Google Chromecast waa qalab digital media kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato videos on Netflix, Hulu Plus, vimeo, YouTube, iyo codsiyada kale video geeyo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad sii qulquli taageeray barnaamijyadooda Chromecast, daawato videos on YouTube, HTTP il video goobaha ku salaysan, qulquli Vidcast taageeray videos, iyo durdur soo bixi YouTube videos.
Ka hor inta aadan ku raaxaysan karaan filimada aad jeceshahay, ay muujinayso tv, iyo videos music la isticmaalayo mid ka mid ah hababkan, si loo hubiyo in qalabka Chromecast xiran yahay si aad television HD iyo Mudanayaasha on your Android, macruufka telefoonka ama kiniin ah, Mac, Windows ama Chromebook. Raac tilmaamaha ku Chromecast Setup page in si sax ah Mudanayaasha qalab Chromecast.
Xulashada 1: Stream Videos la Chromecast taageerayaan Apps
Chromecast taageertaa dhowr codsiyada internetka, sida Netflix, Hulu Plus, iyo YouTube. Waxaad ku haboon qulquli karaan filimada aad jeceshahay, music, carwooyin iyo tv aad television isticmaalaya iyo barnaamijyadaba kale oo ay taageerayaan. Just loo hubiyo in qalab aad ku xiran shabakadda isku Wi-Fi sida qalab Chromecast.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad sii qulquli videos ka Netflix, Hulu Plus, ama YouTube, kaliya raacaan tilmaamaha fudud.
Wuxuu furaa Netflix, Hulu Plus ama YouTube app on qalab aad. Waxaad u baahan doontaa in tijaabo ah ama rukun bixisay in Netflix iyo Hulu Plus si ay u sii qulquli videos.
Hadda riix badhanka tuuraan oo ay doortaan qalabka Chromecast aad.
Raadi video YouTube in aad jeclaan lahayd in la daawado. Waxaad arki doontaa video play aad television.
Wixii barnaamijyadooda taageeray dheeraad ah, tag Chromecast page taageero app .
Xulashada 2: qulquli YouTube videos la Google Dhisa
Si aad u sii qulquli YouTube videos la Google laguu tuuro, waxaad u baahan doontaa inaad baxdo iyo rakibi kordhin ku tuureen Google in uu ku yaalaa on the page Kabka Google , ka dibna waxa loo soo dajiyo aad Chrome browser. Just loo hubiyo in qalab aad si fiican ku xiran television HD aad iyo aad leedahay khadka Wi-Fi ka hor inta aadan soo dajiyo kordhin ku tuureen Google. Marka qalab aad si sax ah ugu xiran oo ah Mudanayaasha, raac tilmaamaha hoos ku qoran si ay u bilaabaan hoorto YouTube videos.
On qalab aad, furo app YouTube ah.
Xulashada 3: Stream HTTP ku salaysan Videos la Dreamstream Wondershare
Wondershare Dreamstream kuu ogolaanaya in aad sii qulquli HTTP ku salaysan videos, sida YouTube, vimeo, Daily Motion, iyo VideoBash, aad Chromecast qalab aad network wireless. Waxa kale oo aad sii qulquli karaan heerka MPEG-4, MOV, iyo WebM qaabab video, iyo sidoo kale MP3 iyo AAC audio qaabab in Chromecast.
Raac tilmaamaha hoos ku qoran si ay u bilaabaan hoorto oo dhan videos HTTP ku salaysan la Dreamstream.
Hubi in aad computer ku xiran shabakadda isku Wi-Fi sida qalab Chromecast aad, iyo qalab aad si sax ah waa Mudanayaasha. Raac tilmaamaha ku qoran bogga Mudanayaasha Chromecast si loo dhamaystiro hawsha.
On qalab aad, guji badhanka kabka ka dibna dooro file HTTP in aad ciyaari lahaa aad tv. File video ayaa la ciyaari doona aad tv. Iyadoo Dreamstream aad qulquli karaan YouTube, VEVO, MyVideo, CNN, Funny ama dhinta, Aol.on, Fox News, CBS New videos iyo kuwa kale.
Xulashada 4: Stream Vidcast taageerayaan Videos
Vidcast kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato videos vidcast taageerto (vimeo, TED, Facebook, dailymotion, traileraddict, buzzfeed, Kickstarter, theguardian, funnyordie, khanacademy, wistia) iyada oo qalab Chromecast. Si aad u sii qulquli Vidcast taageeray videos on your Google Chromecast, raac tilmaamaha hoos ku qoran.
Setup qalab Chromecast iyo aad kaniini, PC, telefoon ama Mac la app Google Chromecast. Si aad ah Mudanayaasha app, u tag bogga Mudanayaasha Chromecast .
Download iyo rakibi kordhin Kabka Google Chrome ee browser.
Hadda falgali u Vidcast bogga iyo jiidi bookmarklet ka Vidcast in aad Bookmarks bar.
Raadi dooro video vidcast taageerto in aad jeclaan lahayd in ay daawadaan, ka dibna riix on bookmark Vidcast ah.
Press play dooro qalab Chromecast. Your video ciyaari doontaa tv.
Xulashada 5: Stream YouTube bixi Videos la Wondershare AllMyTube
Wondershare AllMyTube kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi oo loogu badalo YouTube videos. Waxaad ku soo bixi kartaa in aad Mac ama Windows oo isku day lacag la'aan ah ama waxa ay soo iibsadaan lacag hal mar ah oo dhan $29.00 ah. Raac tilmaamaha ku AllMyTube Sida loo isticmaalo page inaad kala soo baxdo iyo badalo YouTube videos in MP4 on your computer. Markaas waxaad u isticmaali kartaa app Kabka Google si ay u sii qulquli videos in aad Chromecast.
> Resource > Video > 5 siyaabaha loo sii qulquli Web Video la Google Chromecast